Zlodusi - Croata - Birmanês Traduçãoeexemplos
Você procurou por: zlodusi (Croata - Birmanês)
Zlodusi ga zaklinjahu: "Ako nas istjera, poalji nas u ovo krdo svinja."
နတ်ဆိုးတို့လည်း ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်တို့ကိုနှင်ထုတ်လျှင်၊ ထိုဝက်အစုထဲသို့ ဝင်ရပါမည် အကြောင်း အခွင့်ပေးတော်မူပါဟု တောင်းပန်ကြသော်၊
A moljae ga èovjek iz koga iziðoe zlodusi da moe ostati s njim, ali ga on otpusti govoreæi:
နတ်ဆိုးထွက်သွားသောသူသည် ကိုယ်တော်နှင့် အတူရှိပါမည်အကြောင်း တောင်းပန်လျှင်၊
Tada zlodusi iziðoe iz èovjeka i uðoe u svinje. Krdo jurnu niz obronak u jezero i podavi se.
နတ်ဆိုးတို့သည် လူမှထွက်၍ ဝက်ထဲသို့ဝင်သဖြင့်၊ ဝက်အစုသည် အိုင်ကမ်းစောက်ကို တဟုန်တည်း ပြေးဆင်း၍ အသက်ဆုံးကြ၏။
Vratie se zatim sedamdesetdvojica radosni govoreæi: "Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na tvoje ime!"
ထိုခုနစ်ကျိပ်သော တပည့်တော်တို့သည် ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့် ပြန်လာ၍၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်၏ နာမအားဖြင့် အကျွန်ုပ်တို့သည် နတ်ဆိုးကိုပင် နိုင်ပါသည်ဟု လျှောက်ကြ၏။
A ljudi iziðoe vidjeti to se dogodilo. Doðoe Isusu i naðoe èovjeka iz kojega bijahu izali zlodusi gdje do nogu Isusovih sjedi, obuèen i zdrave pameti. I prestrae se.
လူများတို့သည် ထိုအမှုအရာကို ကြည့်ရှုအံ့သောငှါ ထွက်လာကြ၏။ အထံတော်သို့ ရောက်သော အခါ နတ်ဆိုးထွက်သွားသောသူသည် အဝတ်ကိုဝတ်၍ ပကတိစိတ်နှင့်ယေရု၏ ခြေတော်ရင်း၌ ထိုင်နေသည် ကို မြင်လျှင်၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။
Isus ga nato upita: "Kako ti je ime?" On reèe: "Legija", jer u nj uðoe mnogi zlodusi.
ယေရှုကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်အမည်ရှိ သနည်းဟုမေးတော်မူလျှင်၊ ထိုလူကို နတ်ဆိုးအများ စွဲ သောကြောင့် အကျွန်ုပ်အမည်ကား လေဂေါင်ဖြစ်ပါသည်ဟု လျှောက်ပြီးမှ၊
A iz mnogih su izlazili i zlodusi vièuæi: "Ti si Sin Boji!" On im se prijetio i nije im dao govoriti jer su znali da je on Krist.
နတ်ဆိုးတို့လည်း၊ ကိုယ်တော်သည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူ ၏ဟု ဟစ်ကြော်လျက်လူများမှ ထွက်သွားကြ၏။ ကိုယ်တော်သည် ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကို သူတို့သိကြသော ကြောင့် စကားတခွန်းကိုမျှ မပြောစေခြင်းငှါ မြစ်တားတော်မူ၏။
dispnee (Italiano>Francês)hipertrigliceridemija (Lituano>Português)employee (Inglês>Português)fmea (Espanhol>Inglês)ligpit ng kalat (Tagalo>Inglês)satisfies (Inglês>Persa)naparirito (Tagalo>Coreano)lekker meisje (Holandês>Inglês)send nudes (Inglês>Tagalo)amin ya rabbal amin ya rabbal alamin (Malaio>Árabe)activação (Português>Italiano)jai de banger in tagalog (Tagalo>Inglês)bien (Português>Espanhol)davon gesattigte fettsaure (Alemão>Inglês)tamil siru semippu proverbs (Inglês>Tamil)video za x za wema sepetu (Suaíli>Inglês)filtrācijas koeficents (Letão>Inglês)why are you making fun of me (Inglês>Tagalo)gaand (Hindi>Telugu)betweenmember (Inglês>Sueco)listen point and say (Inglês>Italiano)jordgubbar (Dinamarquês >Tcheco)kraljicom (Sérvio>Finlandês)hunodd mawrth (Galês>Inglês)takigan in english (Cebuano>Tagalo)